Home News War Deg Deg ah:-Askari Lagu Toogtay Magaalada Muqdisho
War Deg Deg ah:-Askari Lagu Toogtay Magaalada Muqdisho
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya isgoyska Afarta Darjiino ee magaalada Muqdisho, laba askari oo ka tirsan ciidanka Minishiibiyada ee canshuurta qaada ayaa lagu dilay halkaasi, barkhanimadii maanta.
Laba dhalinyaro ah oo ku hubeysan Bastoolado ayaa ciidankan ku toogtay isgoyskaasi, gaar ahaan dhanka degmada Shibis, sida ay inoo sheegeen goobjoogayaal arkayay marka uu falka dhacayay.
Ragga dilka geystay ayaa marka hore rasaas ku bilaabay mid ka mid ah askarta, kadib ayaa askarigii kale oo isku dayay inuu baxsado isaguna halkaasi lagu dilay, intaasi kadib waxaa goobta ka baxsaday dableyda dilka geysatay.
“Aniga sida ay wax u dhaceen wax badan kaagama sheegi karo, laakiin laba nin oo hubeysan ayaa askarkan ka tirsan ciidanka minishiibiyada ka tirsan waxa ay ku dileen Afarta Darjiino, iyaga oo xilligaasi ku guda jira shaqadooda, kadibna way baxsadeen, qof daba gashay ma jirin.” Ayuu yiri qof ka mid ah dadka deegaanka.
Ciidanka ammaanka oo wata gaadiidka dagaalka ayaa tagay goobta uu dilka ka dhacay waxayna halkaasi ka qaadeen meydadka askartan, iyaga oo oo sidoo kale baaritaano amni xaqiijin ah ka sameeyay goobtaasi.
Saraakiil ammaanka qaabilsan ayaa Warbaahinta u sheegay askarata la dilay inay wateen laba Bastooladood, oo aanay ka qaadan kooxda hubeysan, sidoo kalena xilligii la tooganayay ay ku mashquulsanaayeen shaqadooda.
Kooxaha Bastooladaha ku hubeysan ayaa maalmahan kordhiyay dilalka qorsheysan ee ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho, maanta iyo Saddexdii maalmood ee ka horeysay waxaa magaalada ka dhacay dilal qorsheysan oo kooxihii geystay aanay suuragelin in gacanta lagu soo dhigo.
Previous articleMaxaa loo ceyriyay Taliyayaasha NISA? Yaase ka danbeeyay?
Next articleUrurka ONLF oo sheegay in uusan Wali Xor aheeyn Qalbi Dhagax!!
Shirka Madaxda Maamul Goboleedyada ee Ka Furmi Doono Baydhabo oo Walwal...